Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: Real Madrid, Liverpool ayaa xiriir joogto ah la leh xiddiga kooxda PSG Mbappe
Xan ayaa leh: Real Madrid, Liverpool ayaa xiriir joogto ah la leh xiddiga kooxda PSG Mbappe
Qandaraaska uu ku joogo 2022, xiddiga Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa ku biiri kara midkood Real Madrid ama Liverpool.
Real Madrid iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay hogaaminayaan loolanka loogu jiro Kylian Mbappe hadii xiddiga reer France uu go’aansado inuu ka tago Paris Saint-Germain.
Mbappe, oo 21 jir ah, ayaa qandaraas kula jira PSG ilaa 2022, taasoo mustaqbalkiisa ka dhigeysa meel laga hadlo sannadka soo socda.
Waxay umuuqataa mustaqbalka laacibka reer France mid kamid ah seddexda naadi.
Sheekada ugu sarreysa - REAL MADRID, LIVERPOOL HOGAAMINTA MBAPPE
Mustaqbalka Mbappe ayaa la go’aamin doonaa sanadka dambe weeraryahankuna wuxuu joogi doonaa PSG, Real Madrid ama Liverpool, sida laga soo xigtay L’Equipe.
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa si aad ah loola xiriirinayay kooxda Zinedine Zidane ee Madrid hore, halka Jurgen Klopp oo heysta horyaalnimada Premier League sidoo kale lagu soo waramayo inuu xiiseynayay waqtiyadii lasoo dhaafay.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Liverpool iyo Madrid ay xiriir joogto ah la leeyihiin Mbappe.
- Luis Suarez ayaa qarka u saaran inuu ka tago Barcelona, ​​laakiin kooxda ku xigta ee weeraryahanku weli ma cadda. Sport ayaa qortay in Suarez uu heshiis la gaaray Atletico Madrid, sida muuqata labo xilli ciyaareed, laakiin Barca ayaa la sheegay inay dooneyso inay ka horjoogsato inuu si toos ah ugu biiro koox ay xafiiltamaan.
- Manchester United wey is xoojin kartaa isla marka usbuucan. The Guardian ayaa ku warameysa in daafaca bidix ee kooxda FC Porto Alex Telles uu rajeynayo inuu dhameystiro ku biiritaankiisa United isbuucaan waxaana ay sheegeysaa in kooxda ka ciyaarta Premier League inay rajeyneyso inay qiimaha 27 jirkaan ka dhigto 23 milyan ginni oo u dhiganta 25 milyan ginni.
- Iyadoo Kepa Arrizabalaga uu markale dhaleeceyn kala kulmayo, Chelsea ayaa qarka u saaran inay soo dhaweyso goolhaye cusub. RMC Sport ayaa warinaya in kooxda ka ciyaarta Premier League ay dhameystirtay heshiis ku kacaya m 22million (€ 24m), oo lagu daray £ 5.5m (€ 6m) oo gunno ah, iyadoo Rennes uu la joogo Edouard Mendy.
- Joogitaanka Chelsea iyo N'Golo Kante waxaa lagu soo waramayaa inay dooneyso Inter. Corriere dello Sport ayaa warinaya in tababaraha kooxda Inter Antonio Conte uu doonayo laacibka qadka dhexe, laakiin illion 50million (£ 45.9m) oo lagu weydiisanayo waa wax aan macquul aheyn kooxda Serie A-da haddii aan la iibin Christian Eriksen ama Marcelo Brozovic.
- Sidoo kale dhaq dhaqaaq ayaa ka jiri kara Real Madrid. EFE ayaa ku warameysa in Luka Jovic uu riixayo inuu ku laabto Eintracht Frankfurt amaah ka dib markii uu ku dhibtooday xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee kooxda LaLiga. Dhanka kale, Marca ayaa sheegeysa in weeraryahankii hore ee Paris Saint-Germain Edinson Cavani loo soo bandhigay Madrid.
- Inkastoo Suarez laga yaabo inuu yimaado, Atletico Madrid ayaa sidoo kale ka fikireysa xulashooyinkooda kala iibsiga. AS ayaa ku warameysa inay sugayaan dalabyo ku aadan Diego Costa, halka Marca ay sheegeyso in kooxda LaLiga u baahan tahay inay aragto ciyaaryahan ka tagaya ka hor inta aysan la soo wareegin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira.
Wafdi Uu Hogaaminayo Madaxweynaha Galmudug Oo Lagu Soo Dhaweeyay Sama-Reeb “SAWIRRO”